“နှစ်တိုင်းသင်္ကြန်ရဲ့ ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့ပြီး ဒီနှစ်သင်္ကြန်မရှိတော့လို့ ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်” - Cele Connections
“နှစ်တိုင်းသင်္ကြန်ရဲ့ ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့ပြီး ဒီနှစ်သင်္ကြန်မရှိတော့လို့ ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်”
CeleConnectionsပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးလေး သဇင်ထူးမြင့်နဲ့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါဘူး။သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ (၂၀၁၈)ရွှေကြိုမယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အနုပညာပိုးပါတာကြောင့် MTVတွေမှာလည်း သရုပ်ဆောင်အဖြစ်လုပ်နေသူဆိုလည်းမမှားလောက်ပါဘူးနော်။
သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အခုလတ်တလောမှာအနုပညာအလုပ်တွေကို ခေတ္တအနားယူကာအိမ်မှာနေရင်း အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်ပေးရှိသူတစ်ဦးပါ။ သူမက” နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ရောက်ရင်ရင်ခုန်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘယ်သူအရင်ဆုံး ရေလာလောင်းမှာလဲပေါ့ဦးဆုံးလောင်းစေချင်တဲ့သူကိုဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တွေးထားပြီးသား ဒီနှစ်ကတော့ ဂွမ်းပြီ.(အိမ်မှာနေရင်းရူးကြောင်ကြောင် လျှောက်တွေးခြင်း)”ဆိုကာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နှစ်တိုင်းသင်္ကြန်ရောက်တိုင်းရင်ခုန်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီနှစ်သင်္ကြန်မရှိတော့လို့ရင်ခုန်စရာမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကို တင်လာခဲ့တာပါပဲနော်။
CeleConnectionsပရိသတ်တွေအတွက် သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ နှစ်တိုင်းသင်္ကြန်ရဲ့ရင်ခုန်မှုအကြောင်းကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း သဇင်ထူးမြင့်လေးကို ချစ်တယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်လေးတစ်ခုလောက်ရေးပေးခဲ့ကြပါနော်။
“နှဈတိုငျးသင်ျကွနျရဲ့ ရငျခုနျစရာကောငျးခဲ့ပွီး ဒီနှဈသင်ျကွနျမရှိတော့လို့ ဝမျးနညျးတယျဆိုတဲ့ သဇငျထူးမွငျ့”
CeleConnectionsပရိသတျတှနေဲ့ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျတဲ့ သရုပျဆောငျခငျလှိုငျရဲ့သမီးအငယျဆုံးလေး သဇငျထူးမွငျ့နဲ့ အထူးတလညျမိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူးထငျပါဘူး။သဇငျထူးမွငျ့ကတော့ (၂၀၁၈)ရှကွေိုမယျအဖွဈရှေးခယျြရငျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားသူပဲဖွဈပါတယျ။ ဖခငျဖွဈသူရဲ့အနုပညာပိုးပါတာကွောငျ့ MTVတှမှောလညျး သရုပျဆောငျအဖွဈလုပျနသေူဆိုလညျးမမှားလောကျပါဘူးနျော။
သဇငျထူးမွငျ့ကတော့ အခုလတျတလောမှာအနုပညာအလုပျတှကေို ခတ်ေတအနားယူကာအိမျမှာနရေငျး အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို တငျပေးရှိသူတဈဦးပါ။ သူမက” နှဈတိုငျး သင်ျကွနျရောကျရငျရငျခုနျတာ တဈခုပဲရှိတယျ။ဘယျသူအရငျဆုံး ရလောလောငျးမှာလဲပေါ့ဦးဆုံးလောငျးစခေငျြတဲ့သူကိုဟုတျဟုတျမဟုတျဟုတျတှေးထားပွီးသား ဒီနှဈကတော့ ဂှမျးပွီ.(အိမျမှာနရေငျးရူးကွောငျကွောငျ လြှောကျတှေးခွငျး)”ဆိုကာ သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာတငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ နှဈတိုငျးသင်ျကွနျရောကျတိုငျးရငျခုနျခဲ့ရပမေယျ့ ဒီနှဈသင်ျကွနျမရှိတော့လို့ရငျခုနျစရာမရှိတော့တဲ့အကွောငျးကို တငျလာခဲ့တာပါပဲနျော။
CeleConnectionsပရိသတျတှအေတှကျ သဇငျထူးမွငျ့ရဲ့ နှဈတိုငျးသင်ျကွနျရဲ့ရငျခုနျမှုအကွောငျးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး သဇငျထူးမွငျ့လေးကို ခဈြတယျဆိုရငျ မှတျခကျြလေးတဈခုလောကျရေးပေးခဲ့ကွပါနျော။
မိန်းမဖြစ်သူကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးရေနွေးပူနဲ့အလောင်းခံရတဲ့ လူရွှင်တော်တော့ပ်အတွက် ဆေးဖိုးဝါးခ အလှူငွေ(၅)သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရန်အောင်
“ဟက်ခံနေရတဲ့ပေ့ခ်ျလေး ပြန်မရသေးတဲ့အပြင် ပေ့ခ်ျမှာ တင်သမျှပိုစ့်တိုင်းကလည်း သူမ မဟုတ်ကြောင်းကို ပရိသတ်တွေထံ သတိပေးလာတဲ့ဝိုင်းလေး”
“ဒီကနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့တာလေးကို မျှဝေလာတဲ့ ဝိုင်းလေး”